Mihamaro ny olona misafidy ny hampiasa countertop marbra noho ny fisehoany tsara tarehy sy ny endriny tena tsara.
Voalohany, henjana avo. Tsy mora ovaina. Ny marbra voajanahary dia ny mandalo taona maro mba hamoronana voajanahary. Ka homogenezy voajanahary amin'ny endriny. Ary ny coefficient fanitarana tsipika dia kely dia kely, saika tsy misy fihenjanana anaty. Ka ny hamafiny dia avo dia avo, amin'ny fampiasana ny fizotrany dia tsy hiova endrika.
Faharoa, mahatohitra ny harafesina sy ny asidra. Ny marbra voajanahary dia ny firafitry ny fikambananany manokana, ka tsy mora ny mijaly noho ny fikaohin'ny ranon-tsiranoka asidra.
Fahatelo, fanoherana ambony akanjo ary fanoherana ny hafanana avo. Satria avo kokoa ny hamafin'ireo fitaovana marbra, ary tena tsara ny hamafisana, noho izany dia matanjaka koa ny fanoherana ny akanjo. Tsy izany ihany fa ny fanoherana ny hafanana avo lenta dia tena tsara ihany koa. Tsy ny fiovan'ny mari-pana sy ny fiovana amin'ny toetr'andro. Amin'ny hafanan'ny efitrano dia afaka mitazona ny fananana ara-batana am-boalohany .Koa lava kokoa ny androm-piainana.
Fahaefatra, fananana ara-batana marin-toerana. Ny firafitry ny marbra voajanahary dia be pitsiny ary mitovy. Na dia misy fiantraikany ivelany aza dia tsy hihena izany, tsy ho voakasik'izany ny fahamendrehana ambonimbony satria matanjaka ara-batana ny fitaovana dia afaka miantoka tsy misy fiovana aorian'ny fampiasana maharitra sy anti-harafesina, antimagnetika, insulation
Fahadimy, tsy misy magnetisation. Ny fitaovana marbra voajanahary na oviana na oviana aorian'ny fampiasana azy dia tsy hiseho magnetized, afaka mihetsika tsara Ary tsy voan'ny hamandoana.
Noho ireo tombony ireo dia ampiasaina bebe kokoa ny countertops marbra, ary ny endriny dia samy hafa be ihany koa. Ankoatry ny countertops marbra tsotra, izy io dia azo ampiarahina amin'ny fitaovana hafa, fifandonana noho ny hatsarana tsy manam-paharoa.